दशैंको अवसरमा नेपाल टेलिकमको विशेष छुट अफर, के–के पाइन्छ छुट ? [सूचीसहित]
काठमाडौं – नेपाल टेलिकमले दशैंको अवसरमा विशेष छुट उपलब्ध गराएको छ ।
दशैंको पहिलो दिन अर्थात् आइतवार घटस्थापनाबाटै लागू हुनेगरी फोरजी/एलटीई र अन्य सेवाहरूमा विशेष छुट सहितका अफर ल्याएको हो ।
यस्तै दशैंका अवसरमा रिचार्ज गर्दा बोनस समेत पाइने टेलिकमले जनाएको छ ।
के–के पाइन्छन् सुविधा ? हेर्नुहोस् सूची :
नेपाल टेलिकमले नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमीको उपलक्ष्यमा विगत वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि कम्पनीका सेवाहरूमा विभिन्न आकर्षक छुट उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीले फोरजी/एलटीई र अन्य सेवाहरूमा विशेष छुट सहितका अफर ल्याएको छ । यी मध्ये रिचार्जमा बोनस बाहेकका अफरहरू आज घटस्थापना अर्थात असोज १२ देखि नै लागू भएका छन् ।
१. फोरजी/एलटीई सिम परिवर्तन गर्दा कुनै शुल्क लाग्ने छैन । अर्को सूचना नभए सम्म यो अफर निरन्तर रहने छ । ग्राहकले *444# डायल गरी सिम परिवर्तन गर्नु पर्ने वा नपर्ने थाहा पाउन सक्नुहुनेछ ।
४. प्रिपेड ग्राहकले पनि आगामी छठ (कात्तिक १६ गते) सम्म मिस्ड कल अलर्ट (एमसीए) सेवा निःशुल्क खरिद गर्न सक्नुहुनेछ । आफ्नो मोबाइलमार्फत ८1400३ डायल गरेर दिइएका विकल्प अनुसार अथवा sub mca लेखेर 1400 मा एसएमएस पठाई यो सुविधा प्राप्त गर्न वा unsub mca लेखेर 1400 मा एसएमएस पठाई यो सुविधा हटाउन सकिन्छ । साथै कम्पनीको एप ‘नेपाल टेलिकम’ बाट पनि यो सेवा प्रयोगमा ल्याउन वा हटाउन सकिन्छ ।
मिस्ड कल अलर्ट (एमसीए) ले नेटवर्क नभएको, मोबाइल बिजी भएको वा मोबाइल फोन स्विच अफ भएको समयमा पनि पछि स्विच अन गर्दा यसरी छुटेका वा मिस्ड भएका कलहरूको अलर्ट दिन्छ ।
५. रिचार्जमा बोनस : जीएसएम/सीडीएमए ग्राहकका प्रिपेड/पोष्टपेड मोबाइलमा रिचार्ज गर्दा बोनस उपलब्ध गराइने छ ।
महान् पर्व विजया दशमीको अवसरमा आगामी असोज १८ देखि २४ गतेसम्म रिचार्ज कार्ड वा एमपोसबाट रिचार्ज गर्दा बोनस प्रदान गरिने छ । यस योजनामा रु. ५०।–, १००।– र २००।– को रिचार्ज कार्डबाट रिचार्ज गर्दा १० प्रतिशत र रु. ५००।– र १०००।– को रिचार्ज कार्डबाट रिचार्ज गर्दा २० प्रतिशत बोनस प्राप्त हुनेछ । रु. ५०, १००।– र २००।– को बोनस ३ दिन भित्र र रु. ५००।– र १०००।– को बोनस ५ दिन भित्र उपयोग गरिसक्नु पर्नेछ ।
नेपालीहरूका महान् चाडहरू विजया दशमी, दीपावली, छठ तथा नेपाल संवतका अवसरमा नेपाल टेलिकम सम्पूर्ण सेवाग्राही महानुभावहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।